सार्वजनिक, रिवर्स मर्जर, सार्वजनिक शेल कम्पनीहरू उपलब्ध छन्
तपाईंको व्यवसाय प्रबन्ध गर्नुहोस्
अब इन्कर्पोरेट LLC कार्पोरेशन
कुनै पनि समयमा २ 24/7 लाई कल गर्नुहोस् 1-888-444-4812
कसरी सार्वजनिक जाने - आईपीओ, रिभर्स मर्जर, र सार्वजनिक शेलहरू
ब्यापार स्टार्ट-अप र व्यक्तिगत सम्पत्ति सुरक्षा सेवाहरू।
सार्वजनिक रूपमा जानु भनेको साधारणतया शेयरको शेयर बेच्ने प्रक्रिया हो, जुन पहिले निजी रूपमा राखिएको थियो, साधारण जनताका सदस्यहरूलाई। प्रक्रिया जटिल छ, धेरै नै विनियमित छ र धेरै फाइदाहरू छन्, तपाईंको कम्पनी सार्वजनिक लिने:
तपाईंलाई थप वित्तीय स्रोतहरू प्रदान गरेर तपाईंको कम्पनीलाई बढि छिटो बढ्न मद्दत गर्दछ।
तपाइँलाई आकर्षण गर्न र उचित तलब (शेयर विकल्पहरू मार्फत) को साथ शीर्ष व्यक्तिलाई राख्न मद्दत गर्दछ।
जानकार, अनुभवी निर्देशकहरूको बोर्डलाई आकर्षित गरेर तपाईंको कम्पनी छिटो बढाउनुहोस्।
द्रुत र कम लागतको साथ पूंजी बढाउनुहोस्।
तपाईं र तपाईंको लगानीकर्ताहरूको लागि तरलता बढाउँछ।
पूंजी खाली गर्दछ र बजार योग्य स्टक सिर्जना गर्दछ जुन अन्य कम्पनीहरूको अधिग्रहण गर्न र अन्य कम्पनीहरूसँग रणनीतिक उद्यमहरू निर्माण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
ठूलो सम्झौताको प्रतिस्पर्धा गर्ने तपाईंको क्षमता बढाउँदै तपाईंको विकास दर बढाउँदछ।
छिटो र पर्याप्त रूपमा तपाइँको कम्पनी को मूल्य बढाउन सक्छ।
तपाईको व्यवसायमा तपाईको आफ्नै लगानीलाई फाइदा पुर्‍याउँछ यसलाई अधिक मूल्यवान बनाएर, तपाईको व्यक्तिगत आरओआई बढाउँदै।
तपाईको ब्यापारको स्थिति बृद्धि गर्दछ जसले गर्दा नयाँ व्यापार आकर्षित गर्न सजिलो हुन्छ।
यदि तपाईंसँग पहिले नै सार्वजनिक कम्पनी छ भने हामी तपाईंको कम्पनीको मूल्य र नाफा बढाउन मद्दत गर्न सक्दछौं र मुद्दा मुद्दाबाट सम्पत्ति जोगाउन मद्दत गर्न सक्छौं।
ख्याल गर; यो केवल पैसा उठाउनको बारेमा मात्र होइन। यो पक्का हुनुको बारे पनि हो
कम्पनी राम्रो सञ्चालन र व्यवस्थित छ। शीर्ष सीईओहरूले यसको फाइदाको लागि काम गर्छन्
शेयरधारकहरु दिमागमा उनीहरूको उत्तम चासो राख्नुहोस् र तिनीहरूले तपाईंको उद्देश्य बुझ्नेछन् र धेरै व्यक्तिहरू तपाईंको संगठनमा आकर्षित हुनेछन्। यो दीर्घकालीन दृश्य हो जुन महत्त्वपूर्ण छ र एक पटकको शट होइन। तपाईंलाई यसलाई राम्रोसँग संरचित कर्पोरेसन, ध्वनि व्यवसाय योजना र जानकार व्यक्तिहरूको आवश्यक पर्दछ। चाहे तपाईं अमेरिका, जर्मनी, चीन, क्यानडा वा अन्य स्थानमा हुनुहुन्छ, मद्दतको लागि हामीलाई खोज्नुहोस्।
तपाईंलाई के सहयोगको खाँचो छ?
के तपाई आफ्नो बिक्री बढाउन चाहानुहुन्छ?
के तपाईलाई लागत कम राख्नु पर्छ?
के तपाइँ अन्य व्यवसायहरू प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ र राम्रो उम्मेदवारहरू फेला पार्न आवश्यक छ?
के तपाईंलाई राम्रो व्यापार योजना चाहिन्छ?
विज्ञापन र मार्केटिंगको बारेमा के हुन्छ? सहयोग चाहियो?
के तपाईंलाई एक राम्रो समर्थन प्रणाली र जानकार व्यक्तिको सूची चाहिन्छ?
मानिसहरु लाई तपाईको स्टक "छोटि" गर्नबाट बचाउन के?
S&P 500 कम्पनीहरूसँग व्यापार गर्न चाहानुहुन्छ?
तपाइँको नामलाई सार्वजनिक रुपमा लागत लागत प्रभावी तरीकामा प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ?
के तपाईं गुलाबी पानाबाट बाहिर निस्कन चाहनुहुन्छ र ठूलो एक्सचेन्जमा जान चाहनुहुन्छ?
यहाँ कसरी सुरू गर्ने भन्ने छ
त्यहाँ एक प्रबन्ध छ जहाँ तपाईं "सार्वजनिक जाने" को प्रक्रियाको लागि वित्त गर्न सक्नुहुन्छ।
भिसा, मास्टरकार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस र डिस्कभर पनि स्वीकृत छन्।
प्रक्रियाले तपाईंलाई एक दिन भित्र $ 50,000 हस्ताक्षर loanणमा पहुँच दिन सक्छ (nderणदाता स्वीकृतिमा निर्भर छ) र,
धेरै ठूलो loansण सम्पत्ति र नगदी प्रवाहमा निर्भर हुन्छ यदि तपाईंको अपरेशन छ र
धेरै अवस्थाहरूमा, हामी तपाईंको कम्पनीको सम्भावनाको उनीहरूको दृष्टिकोणमा निर्भर गर्दै सार्वजनिक भैरहेको प्रक्रियालाई वित्तिय रूपमा भेन्चर पूंजीवादीहरूको लागि व्यवस्था गर्न सक्दछौं।
एकचोटि तपाईंले आफ्नो कम्पनीलाई सार्वजनिक गर्नुभएपछि त्यहाँ सन्दर्भहरूको पूरा टोली हुन्छ जुन हामीले तपाईंको सफलताको स्तर बढाउनको लागि व्यवस्थित गरेका छौं। त्यहाँ हामीसँग लामो समयदेखि सम्बन्ध रहेको व्यक्तिहरू छन् जुन हामी प्रयोग गर्छौं वा व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्छौं र अन्य कम्पनीहरूको लागि राम्रो प्रदर्शन गरेका छन। यहाँ आंशिक सूची छ:
विज्ञापन एजेन्टहरू जसले कम लागतमा उत्तम परिणामहरू के पाउँछन् भनेर जान्दछन्।
मार्केटिंगका लागि सल्लाहकारहरू
अधिग्रहणहरूमा मर्जरमा विशेषज्ञहरू
ती तपाईंलाई S&P 500 कम्पनीहरूसँग व्यापार सम्झौता बनाउन मद्दत गर्छन्
हामी १०० बर्ष भन्दा बढी बिसारमा छौं
अनुभव गणना। सार्वजनिक जाने एक उच्च नियमन प्रक्रिया हो। त्यसोभए, तपाईं तिनीहरूमा निर्भर हुन चाहनुहुन्छ जसले तपाईंलाई मद्दत गर्छन्। यो आत्मविश्वास महसुस गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि उनीहरूलाई विस्तृत अनुभव मार्फत प्रक्रियाको इन र आउटहरू थाहा छ। हाम्रो टीम सेक्युरिटी कानूनको दायरा भित्र काम गर्नमा माहिर छ र छिटो र सफल प्रस्तावको लागि राम्रो चिह्नित मार्ग बनाएको छ।
यहाँ सार्वजनिक सुविधाहरु गर्ने जो को लागी केहि फाइदाहरु छन्:
पूंजी र तरलता खाली गर्दछ
व्यापारको मूल्य बढाउँछ।
तपाईंको सार्वजनिक कम्पनी हुँदा पूंजी जुटाउन धेरै सजिलो हुन्छ।
विज्ञापन, उत्पादन पदोन्नति, अन्य जस्ता सेवाहरूको लागि भुक्तान गर्न स्टक प्रयोग गर्न सक्दछ
सेवाहरू र अन्य कम्पनीहरूको स्टक।
अन्य कम्पनीहरूको अधिग्रहण गर्न धेरै सजिलो - स्टकको साथ कम्पनी खरीद गरेर।
सार्वजनिक जाने बारे समाचारहरू
एक प्रत्यक्ष सार्वजनिक अफर (DPO) का एक आईपीओ मा महत्वपूर्ण लाभ हुन सक्छ। आईपीओको साथ एकले घोषणा गर्नु पर्छ कि कम्पनीले सेयर बेच्ने मार्फत कति बढाउछ। यदि त्यो रकम उठाइएन भने, प्रस्ताव पूरा हुन सक्दैन। यद्यपि, डीपीओसँग त्यहाँ समान प्रतिबन्धहरू छैनन् र त्यहाँ धेरै लचिलोपन छ किनकि तपाईंले प्रस्तावमा प्रस्ताव गरेको पूँजीको रकम जुटाउनुपर्दैन किनकि तपाईंले आईपीओमा गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसोभए, यदि तपाईं सार्वजनिक योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ वा सोच्दै हुनुहुन्छ भने, र एसईसी दर्ता प्रक्रियाले कसरी काम गर्दछ भन्ने बारे जान्नको लागि सार्वजनिक शेल वा रिभर्स मर्जर सहित, दायाँपट्टि फाराम पूर्ण गर्नुहोस् र कसैले तपाईंसँग यस बारे छलफल गर्नेछ। हामी देख्न सक्छौं कि तपाईले कति चाहानुहुन्छ र साथसाथै तपाईले क्यापिटल उठाउन सुरू गर्न चाहानुहुन्छ। सोध्नुहोस् कसरी सार्वजनिक जाने र रिभर्स मर्जको बारेमा सोधपुछ गर्नुहोस्। मद्दत निजी प्लेसमेन्ट मेमोरान्डम (पीपीएम) मा पनि उपलब्ध छ
बीउड पूंजी, स्टार्ट-अप पूंजी, बजार निर्माताहरू, शेल कम्पनीहरू र कसरी आफ्नो कम्पनी सार्वजनिक लिने बारे प्राप्त गर्दै। कानूनी र नैतिकताका रूपमा सार्वजनिक कम्पनीको रूपमा पूंजी जुटाउने बारेमा जानकारी पनि प्रदान गरिएको छ।
जब सबै काम समाप्त हुन्छ, तपाईंको व्यवसाय सार्वजनिक हुन सक्छ र तपाईंको व्यापार, एक सार्वजनिक कम्पनी हुनेछ। हामी तपाईंलाई हातमा लिन्छौं र तपाईंलाई सार्वजनिक ट्रेडिंग कम्पनी बन्ने प्रक्रियाको माध्यमबाट अवरोध कोर्सबाट हामी चरण-दर-चरण हिंड्छौं। हाम्रो पेशेवरहरूको समर्थन स्टाफ पनि एक सार्वजनिक ट्रेडिंग शेल कम्पनी संग एक रिभर्स मर्जर कसरी गर्ने बारे मा अपडेट राख्न सक्नुहुन्छ। एक सार्वजनिक शेल कम्पनी संग एक रिभर्स मर्जर मार्फत सार्वजनिक जान सक्नुहुन्छ। DPO, तथापि, प्राय जसो प्रायः व्यक्तिहरूको लागि रुचाइएको विकल्प हुन्छ।
उचित पदोन्नती र लगानीकर्ता सम्बन्धको साथ सार्वजनिक जानुहोस्
उचित लगानीकर्ताको सम्बन्ध एक नाफा उद्देश्य, कानूनी उद्देश्य, र शान्तिको दिमाग हो। त्यसो भए, हाम्रो फर्मले तपाईंलाई लगानीकर्ताहरूसँग राम्रो संवाद गर्न र स्टकको बढावा गर्न मद्दत गर्दछ। निजी कम्पनीहरूको विपरीत, सही ढ filed्गले दर्ता गरिएको सार्वजनिक कम्पनीले अब सार्वजनिक सदस्यहरूलाई प्रत्यक्ष सार्वजनिक प्रस्तावहरूको विज्ञापन गर्न सक्दछ।
तपाईंको सार्वजनिक कम्पनीको साथ हामी तपाईंलाई शुल्क लिन र तपाईंको व्यवसायको द्रुत र कानूनी रूपमा आवश्यक पूँजी बढाउन मद्दत गर्न सक्दछौं।
हामी तपाईंलाई पहिलेभन्दा पहिले तपाईंको व्यवसायलाई ठूलो दर्शकहरूको रूपमा प्रबर्धन गर्न मद्दत गर्न सक्दछौं।
तपाईं विज्ञापन सेवाहरूको लागि स्टक व्यापार गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसोभए तपाईं यस अनिवार्य रूपमा नि: शुल्क विज्ञापन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र विश्वलाई यो जान्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईं एक सार्वजनिक कम्पनी हो। अधिक व्यक्ति तपाइँको बारेमा जान्दछन् ताकि धेरै मानिसहरूले तपाइँबाट किन्नेछन्। यसले तपाईलाई पुँजी बढाउने क्रममा मद्दत गर्दछ किनकि अधिक लगानीकर्ताहरूले थाहा पाउनेछन् तपाईको कम्पनी स्टक व्यापारका लागि उपलब्ध छ।
जाँदै गरेको सार्वजनिक प्रक्रिया
अधिकांश व्यक्तिहरू कसरी सार्वजनिक हुने भनेर परिचित छैनन्। त्यसो भए, हामी यसलाई सजिलो बनाउँछौं। प्रत्यक्ष सार्वजनिक प्रस्ताव, प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव जस्ता वाक्यांशहरू परिचित छन् तर त्यहाँ पुग्ने बारेमा कसरी थाहा छन् केहिलाई केही थाहा छैन। बजार निर्माता के हो? कसरी तपाईं उत्तम रिभर्स मर्जर गर्नुहुन्छ? राजधानी उठाउने हो? एक सार्वजनिक शेल निगम गठन? ती प्रश्नहरू हुन् जुन हामीले जवाफ दिन्छौं र यी सेवाहरू हुन् जुन तपाईलाई कल गरे पछि प्रदान गर्न सकिन्छ।
पहिलो चरणहरू मध्ये एक S-1 दर्ता फारम पूरा गर्दै छ र यो फाइल गर्ने साथ
धितो र विनिमय आयोग (एसईसी)। एक पटक उनीहरू फाईलिंगको अनुमोदन भए पछि कागजातहरू FINRA, वित्तीय उद्योग नियामक प्राधिकरणमा पेश हुन्छन्। आईपीओ र डीपीओ प्रक्रियाहरूका साथ प्राथमिकताहरू र प्रक्रियाहरू व्यवसायी तरीकाका साथसाथै सार्वजनिक शेल मर्जर प्रक्रियाहरू, १15 सी २१११ फाइलिंग नियम बनाउँदछन् र 211-के फाराम गर्दछन्। EDGAR, जो इलेक्ट्रोनिक डाटा भेला, विश्लेषण, र पुन: प्राप्ति फाइलिंगको लागि राम्रोसँग सम्पन्न हुन्छ ताकि सार्वजनिक शेल कम्पनी गठन हुन्छ, रिभर्स मर्जर राम्रोसँग हुन्छ र स्टार्टअप पूंजी वा ग्रोथ फन्डहरू सफलतापूर्वक उठाइन्छ।
हामीले यस लेखमा पहिले नै उल्लेख गरिसकेका छौं, रुचाइएको विधि प्रायः DPO (प्रत्यक्ष सार्वजनिक प्रस्ताव) हुन्छ। सम्पर्क गर्नुहोस् र हामी तपाईलाई यस विषयमा केही निःशुल्क जानकारी प्रदान गर्न सक्दछौं साथै सार्वजनिक शेल कम्पनीसँग कसरी रिभर्स मर्जर गर्ने भनेर। यसैले, तपाइँ कसरी तपाइँको कम्पनी परम्परागत खर्च बिना सार्वजनिक लिन जान्न सक्नुहुन्छ। यसका अतिरिक्त तपाईले कसरी आफ्नो कम्पनीलाई सार्वजनिक गर्नुहुन्छ र निजी कम्पनीको बिरूद्ध सार्वजनिक कम्पनी प्रयोग गरेर पूँजी उठाउन यति सजिलो किन हुन्छ भन्ने बारेमा सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको स्टक प्रचार - एक राम्रो कहानी भन्दा राम्रो केही छैन
एक राम्रो आईपीओ तपाईंको कथा बेच्नको बारे हो। अनिवार्य रूपमा, राम्रो बिक्री अक्सर राम्रो छ
कथा कथन, के तपाईं सहमत हुनुहुन्न? पहिलो चरणहरू मध्ये एक कथामा दुई दिन काम गर्नु हो। अन्य व्यक्तिहरूद्वारा यसलाई चलाउनुहोस्। त्यस पछि, उही पुरानो विचारहरूको बारे मा droning को सट्टा, लगातार आफ्नो कहानी अपडेट गर्नुहोस्। मानिस भावनाको साथ खरीद र तर्कसंगै आफ्नो निर्णयहरु लाई न्यायसंगत। दुबै तार्किक अन्तरदृष्टि समावेश गर्न निश्चित गर्नुहोस् जुन भावना र भावनात्मक सिजल बनाउँदछ जुन लगानीकर्ताको अणुहरू चल्दछ। एउटा कथा भन्नुहोस् जुन व्यक्तिले कुराकानी गर्नेछ।
सम्भावित आईपीओ लगानीकर्ताहरूको समूहलाई बताउन वास्तवमा एक मात्र कहानी छ: कसरी तपाईंको कम्पनीले अर्को मान्छे भन्दा बढि पैसा कमाउने छ? अधिकांश कर्पोरेट अधिकारीहरू र धेरै बोर्ड सदस्यहरू ग्राहकहरूलाई प्रस्तुत गर्न प्रयोग गरिरहेका छन्। तर, दिमागमा राख्नुहोस्, कि ग्राहकलाई थाहा पाउनु भनेको के हो र एक लगानीकर्ताले जान्न चाहेको कुरा फरक हुन्छ। त्यसो भए, तपाईंको उत्पादनहरू र तपाईं उनीहरूसँग के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको अलावा, जब लगानीकर्ताहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ, तिनीहरूको आरओआईको बारेमा कुरा गर्नुहोस्।
तपाईं कथा लेख्नुहोस्
तपाईं मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ, तर अन्तमा, कथा तपाईं द्वारा लेख्नुपर्दछ। यो सीईओको वा सीएफओको काम हो। दोहोर्याउनको लागि, मानिसहरू भावनाको साथ खरीद र तर्कसंगै खरीद प्रमाणित। त्यसोभए, यदि कथा दुबै अर्थ बनाउँदछ र तपाईंको मुटुबाट आउँदछ, यसैले तपाईंको लागि गहिरो र वास्तविक अर्थ राख्दछ, तपाईंको दर्शकहरूले यो महसुस गर्नेछन्, भावनात्मक रूपमा काम गर्न उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ, र तिनीहरूको निर्णयलाई सजिलै न्याय गर्न सक्दछ।
हामीले दुई कम्पनीहरूसँग काम गर्यौं जुन दुबै उच्च-टेक उद्योगमा थिए। एक मुख्य कार्यकारी अधिकृतले अर्थपूर्ण र हार्दिक प्रस्तुति तयार गर्दै मध्यरात्रको तेल जलाए। अन्य कम्पनीका सीईओले मार्केटिंगका मानिसहरूले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। प्रस्तावहरु प्रस्तुत गरियो र एक दिनको छुट्याएर मूल्य निर्धारण गरियो। पहिलो, जहाँ मुख्य कार्यकारी अधिकृतको उनको प्रस्तुतीकरणमा हृदय थियो, यसको अनुमानित मूल्य दायरा भन्दा धेरै माथि गयो। दोस्रो एक जना तल पुग्यो। यसको लागि त्यहाँ राम्रो कारण छ।
यदि तपाईंले टिभी कार्यक्रम "अमेरिकन आइडल" मा शुरुआती ट्राउट्स देख्नु भएको छ, जहाँ न्यायाधीशहरूले एक पछि अर्को गायन कलाकारहरू देख्दछन्, तपाईंले यो देख्नुभयो कि जब उम्मेदवार पोशाकमा हिंड्दा वा केही अन्य नौटंकी प्रयोग गर्दा सायमन काउल घृणा गर्छन्। तिनीहरू प्रतिभा खोज्दैछन् hype होइन।
संस्थागत लगानीकर्ता उही हुन्। तिनीहरूले हप्ताको हरेक दिन पाँच देखि दस नयाँ लगानी प्रस्ताव देख्न सक्छन्। उनीहरूले यो सबै देखे। केही समय पछि तिनीहरू मूर्ख र सचेत हुन्छन् र सुनका केही थोरै चीजहरू फेला पार्न धेरै बेकारका ढु pe्गाहरू क्रमबद्ध गर्नुपर्दछ। फोनी हाइपरबोलेले सहयोग गर्दैन। कुञ्जी तपाईंको प्रस्तुतीकरणको पहिलो केहि मिनेटमा छ। जब सबैले निर्णय लिन्छन्। लगभग जति महत्त्वपूर्ण प्रश्न र उत्तर चरणको क्रममा अन्तिम १०-१-10 मिनेट हो। लगानीकर्ताहरू तपाईको विचारलाई कडा चुनौतीका साथ तपाईले कसरी रोक्ने भनेर हेर्न चाहन्छन्।
यहाँ एक प्रश्न छ जुन प्रत्येक सीईओ लाई सडकमा सोधिन्छ: "तपाईको सबैभन्दा ठूलो के हो?
चुनौती? " अर्को शब्दहरूमा, "तपाईंलाई रातमा कसरी राख्दछ?" जवाफ दिने उत्तम तरिका भनेको आफ्नो चिन्ताहरू स्वीकार गर्न र श्रोताहरूलाई थाहा दिनुहोस् कि तपाई समस्याहरूको समाधानका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ।
तपाईंको प्रस्तुति सामान्यतया minutes minutes मिनेटको हुन्छ। तपाईंसँग त्यस्तै छ। त्यसो भए, बम खसाउनुहोस् र पहिलो तीन मिनेटमा तिनीहरूलाई तपाईंको उत्तम शट दिनुहोस्। यसले तिनीहरूलाई बस्न र अर्को 45२ को समयमा नोटिस लिन बाध्य पार्नेछ। तपाईं किन फरक हुनुहुन्छ?
यहाँ एक राम्रो उदाहरण छ। रोबोटिक फ्लोर क्लीनरको आविष्कार गर्ने कम्पनीका मुख्य कार्यकारी अधिकृत सम्भावित लगानीकर्ताहरूको समूहसँग यसरी कुरा गर्दै थिए: “म आफ्नो प्रस्तुतिलाई यस प्रश्नबाट सुरू गर्न चाहन्छु कि आज यहाँ कति जना व्यक्तिले भुइँ सफा गरेका छन्?” सबैले आफ्नो हात उठाए। "तपाइँ मध्ये कति जनाले यो गर्न मनपराउनुहुन्छ?" कुनै हात उठाइएन। "जस्तै, तपाई विश्वभरि लाखौं मानिस छन् जो आफ्नो फर्श सफा गर्न मन पराउँदैनन्। एबीसी रोबोटिक्सको समस्या समाधान गर्न उत्पाद छ। "
हामी तपाईंलाई भर्खरको आईपीओ (इनिशिअल पब्लिक अफरिंग) प्रक्रिया, रिभर्स मर्ज, नियम १c सी २११, नियमन डी, सार्वजनिक र सार्वजनिक शेलहरू सम्बन्धी नयाँ सहयोग गर्न मद्दत गर्न सक्दछौं। थप रूपमा हामीसँग निजी प्लेसमेन्ट मेमोरान्डम्स (पीपीएम), नियम 15०211, नियम 504०506, पूंजी र स्टार्टअप पूँजी बढाउने, मुद्दा चलाउनेहरूबाट सम्पत्ति संरक्षणको साथै अमेरिका र विदेशमा नयाँ कम्पनी गठनको जानकारीको लागि हामीसँग सम्पर्क राख्नुहोस्।
यो गर्न को लागी एक कला छ। राजधानी उठाउँदा एक चक्रव्यह हुन सक्छ। हामीसँग नक्शा छ। कम्पनी सार्वजनिक हुँदा के हुन्छ जान्नुहोस् र यसले कसरी मद्दत गर्न सक्छ हेर्नुहोस्।
कसरी तपाईं एक कम्पनी सार्वजनिक जान्छ र तपाईं को लागी सही दृष्टिकोण मा निर्णय लिन सहज लाग्नेछ को बारे मा अधिक जान्नु हुनेछ। त्यसोभए, अधिक जानकारी र परिभाषाका साथ साथै रिभर्स मर्जर, सार्वजनिक शेल मर्जर वा सिधा सार्वजनिक प्रस्ताव (DPO) लाई नियन्त्रण गर्ने चरणहरूका लागि यस पृष्ठको शीर्षमा नम्बर कल गर्नुहोस्। स्वाभाविक रूपमा, यसमा समावेश कुनै पनि जानकारी कानूनी, कर वा अन्य व्यावसायिक सल्लाहलाई मानिदैन। यदि त्यस्तो आवश्यक छ भने एक इजाजतपत्र वकील र / वा एकाउन्टेन्ट को सेवाहरु खोज्नु पर्छ।
जब तपाईं सार्वजनिक जान तयार हुनुहुन्छ, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी १ 1906 ०XNUMX पछि कार्य गर्दै आएका छौं र विश्वव्यापी रूपमा कम्पनी गठन र सार्वजनिक हुन मा नेता को रूपमा परिचित छन्।
विघटन को लेख
राम्रो स्थिरता प्रमाणपत्र
भर्चुअल अफिस प्रोग्राम
मनोनीत निर्देशक र अधिकारीहरू
दर्ता एजेन्ट सेवा
स्व निर्देशित इरा के हो?
कर घटाउने कार्यशालाहरू
शेल्फ कम्पनीहरू र LLCs
नेवादा सम्पत्ति संरक्षण ट्रस्ट
प्रतिलिपि अधिकार © २०१ Companies Companyinc.com | सबै अधिकार सुरक्षित